Wasiirka Waxbarashada Oo Beeniyay In Lacag Laga Qaado Arayda Dugsiyada Dawladda |
Wasiirka Waxbarashada Oo Beeniyay In Lacag Laga Qaado Arayda Dugsiyada Dawladda
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Somaliland Md. Cabdillaahi Ibraahim Habbane ayaa beeniyay eedaymo Wasaaraddiisa uga yimid hoggaanka xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani, kuwaas oo daarranaa in lacag laga qaado ardayda dugsiyada hoose-dhexe ee dalka.
Wasiirka oo shalay hadal ka jeediyay madal ay xilka kula wareegayeen Wasiir-ku-xigeenkii hore ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Wasiir-ku-xigeenka cusub ee ay dhowaan xukuumaddu u soo magacwday Wasaaraddaas ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha sheegaya in ardayda dugsiyada hoose-dhexe ee dalka lacag laga qaado.
“Qolada Mucaaradka ahi waxay nagu eedeeyaan inaannu iskuullada lacag ka qaadno. Annagu lacag sharciyan aannu ognahay oo aan ahayn saddexdii bilood ee aanu nidhi abaaraha ha lagaga qaybgalo mooyaane; November oo 1 doollar ah, December oo 1 doollar ah iyo January oo 1 doollar ah – intaas ayaan annagu og nahay.” ayuu yidhi Wasiir Habbane.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland Md. Cabdillaahi Ibraahim Habbane, isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi: “Rag waaweyn oo dalka inay masuul ka noqdaan doonaya ayaa intay buulal yar 2,000,000 sl.sh. la hor tageen yidhi carruurtan yaryar iskuulkii baa laga soo eryoo waannu caawinaynaa. Halkee laga soo eryay? Iskuulka laga soo eryay kee buu ahaa? Borobagaando ayaa waxaa la yidhaa.”
“Waxaan leeyahay Xisbiyada yaynaan waxbarashada siyaasad galinnin. Waxbarashadu way innaga dhexaysaa, ubadkuna wuu innaga dhexeeyaa. Kuwaad berri doonayso inaad xukunto weeyaan. Aan ka deynno siyaasadda.” ayuu Wasiirku hadalkiisa raaciyay.
Si kastaba ha ahaatee, Waxbarashada aasaasiga ah ee lacag-la’aanta ah ayaa ka mid ahayd himilooyinkii uu
Madaxweyne Siilaanyo ummadda u ballanqaaday xilligii uu ololaha ugu jiray hanashada talada dalka